Iphupha malunga ne-Ice Cream Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
I-ayisikhrim sisibiliboco esimnandi esiqabulayo, ngakumbi kwiintsuku ezishushu zasehlotyeni, esinokuzivuza ngazo ngezinto ezithile, kodwa sizithuthuzele nakwezinye iimeko. Ngokukodwa abantwana bayavuya xa bathenga i-ice cream, kodwa abantu abadala abaninzi bayayonwabela i-dessert entsha.
Nangona kunjalo, sinokuyifumana emaphupheni ethu. Kuyenzeka ukuba abantu baphuphe ukutya i-ayiskhrim okanye ukubona umntu eyenza. Ukutolikwa kwala maphupha kunokwahluka kakhulu kuxhomekeke kutoliko olusetyenzisiweyo.
1 Uphawu lwephupha «ice cream» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ice cream» - ukutolikwa kwengqondo
3 Isimboli yamaphupha «efriziwe» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ice cream» - ukutolikwa ngokubanzi
Nabani na obandayo ephupheni unokukuqonda oku njengophawu olunethemba: ngokoluvo ngokubanzi, luyathembisa Suerte kunye nokujika kwemicimbi eyahlukeneyo ibe ngcono. Nangona kunjalo, ukuba i-ayisi khrim iyanambitheka, inokuba njalo Iingxaki kwaye ubunzima obuzakufika endleleni yephupha bubonisa. Kwenzeka into efanayo ukuba i-ayisi khrimu inyibilika ngokukhawuleza: kule meko, umntu ochaphazelekayo akufuneki alinde ukuba imeko yakhe iphuculwe, kodwa azilungiselele amashwa kunye namaqhina amabi.
Ukuba lo mntu kuthethwa ngaye utya okanye aphose i-ayisikhrim ephupheni ngemini eshushu kakhulu yehlobo, oku kuyazisa kwakhona. Iihambo phakathi. Unokudinwa kakhulu kuye kwaye amaphupha afuna ikhefu.
Umntwana otya i-ayisi khrim emaphupheni akhe ufuzisela ithamsanqa, kodwa kunye nempumelelo kwimicimbi yezemali. Ukuba ibhola yomkhenkce iyawa, abafazi abancinci ngakumbi kufuneka balumkele abo babathandayo-banokuba benayo iinjongo ezingekho nzulu, njengoko iphupha licinga, mhlawumbi uthando lwakhe lude lwenziwe.
Ukuba ubona amabala e-ice cream kwi-napkin ngelixa ulele, kuya kucebiseka ukuba njalo el mundo ukungaziphathi ngendlela engenantsingiselo. Kuba ukwenjenjalo kuya kuzenzakalisa.
Uhlobo lwe-ice cream ephupheni nalo lunokubaluleka ekutolikeni ngokubanzi. Nokuba yi-strawberry, i-vanilla, imelon okanye itshokholethi, udidi ngalunye lunokubonisa into eyahlukileyo. Ke ngoko, imiba yesimboli yamaphupha efanelekileyo kufuneka isetyenziswe.
Uphawu lwephupha «ice cream» - ukutolikwa kwengqondo
Ice cream ihlala ibuyisa iinkumbulo zobuntwana. Ngokusekwe kumbono wengqondo, inokubonisa ephupheni ukuba umntu ekubhekiswa kuye usenokonwabela kwaye axabise izinto ezincinci kubomi bemihla ngemihla. Nangona kunjalo, kwangaxeshanye, i-ayisikhrim ikwangumqondiso we Ukomelela kunye nokuzonwabisa (ngokwesondo). Ngokusekwe koku, inokubonisa ukubaluleka kwezesondo ebomini bomntu. Kubaluleke kakhulu kuye kwaye uyakonwabela ukuzinikezela kule ndawo yobomi bemihla ngemihla, esenza ukuthanda kwakhe ukusondela.
Ukunyibilika kwe-ayisikhrim nako kunokunceda Ukungangqinelani ebomini. Kule meko, umntu onomdla uyaqonda ukuba kufuneka onwabele umzuzu ngamnye omnandi, kuba akasokuze akwazi ukwazi ukuba la mava kunye neemvakalelo ziya kuhlala ixesha elingakanani, ukuba ulonwabo lwakhe aluyi kudlula usuku kwaye amaxesha amabi aya kuza.
Isimboli yamaphupha «efriziwe» - ukutolika kokomoya
Ice cream inokusetyenziswa kwinqanaba lokomoya. Ukungangqinelani uphawu. Ngokukodwa ukuba liphupha elonwabileyo, ungakhumbula ukuphela okunokwenzeka kokonwaba ngokwalo.